ကောင်းမွန်ဝင်း: The Age of Beauty
ဆောင်းပါးမိတ်ဆက်ကိုရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေဖတ်ရတာကို ဘာသာပြန်ပြီး ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးမှာ စာရေးဆရာမဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Lady လို့သုံးထားပြီး ၊ ဗမာပြည် လို့ သုံးစွဲရေးသားထားးပါတယ်။
ＶＯＧＵＥ　ＪＡＰＡＮ စာတည်းအဖွဲ့က နာကာမုရာ့ မာယုမိ ပါ။
မတ်လ၊လလယ်ပိုင်းလောက်က မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ဇန္န၀ါရီလမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လန်ဒန်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကနေ နှစ်ရှည်လများခင်မင်ရင်းနှီးသူနဲ့ ကျွန်မတို့ချင်း ဆက်သွယ်ပြီး သူမထံကို တွေ့ဆုံခွင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဗီဇာယူပြီး သူမဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုဆက်သွယ်ကာ နေ့ရက်များသတ်မှတ်ခဲ့ချိန်အထိကတော့ နှစ်ဝက်နီးပါး ကြာအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ရှည်လျားလှတဲ့ အချိန်များကို ကုန်ဆုံးစေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံ နိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ ကျွန်မ Lady　နဲ့မတွေ့ခင်အထိ၊ သူမဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတာ လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး။ စူးရှပြတ်သားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပြောတဲ့ သူမရဲ့ သဏ္ဍန်။ ဆွတ်ပျံ့ဘွယ်အပြည့်နဲ့ မြင်ရတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ။ ပန်းတစ်ပွင့်လို လှပလွန်းတဲ့ အပြုံး။
သူမဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးပါလိမ့်။ကြောက်စရာပဲလား။ ဟာသတွေကောပြောလို့ရပါ့မလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထက်မြက်လှတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ ယုံမှားဘွယ်မရှိပါဘူး။ …
အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ကျွန်မဟာ သူမကို မတွေ့ခင်အချိန်အထိကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ ဒူးတွေတောင် တုန်ခဲ့ရပါတယ်။
အရင်ဆုံးဒီစီမံကိန်းအတွက် ကျွန်မကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကြည့်ပြီး “ သူမဟာ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး” လို့ မှတ်ချက်ချသူတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ “သူမဟာ နိုင်ငံရေးကလွဲပြီး ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူး” ၊ “ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးတာ ရိုင်းတာပေါ့” လို့ဆိုသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ အဲလိုပြောသူအားလုံးဟာ ဗမာ့ရေးရာ နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။
“ သူတို့ပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မလား” “နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပါပဲ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ သူမရဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောမယ့်စကားတွေကို လူတွေကကြားပြီး သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုပြီးတောင်ထောက်ခံမလာနိုင်ဘူးလား” လို့တွေးရင်း ၊တကယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပဲ ပြောလာလည်း တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲဆိုပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုတောင် အလွတ်ကျက် ထားလိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကျွန်မရဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ နောင်ကိုလည်း သုံးဘို့လမ်းမမြင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
တကယ်လို့များ သူမဟာ စည်းကမ်းတင်းတင်းနဲ့ ပုံမျိုးသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။။။။ ကြောက်လိုက်တာ။ အမလေး ကျွန်မရဲ့ အဖြစ်ကတော့ စာမေးပွဲကြီးတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရမယ့် ကျောင်းသားလေးအတိုင်းပေါ့။
အဲဒီလိုအတွေးတွေအပြည့်နဲ့ ရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့အရှေ့မှာ တကယ်တမ်း တွေ့ရတဲ့ Lady ကတော့၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပွင့်လင်းပေါ့ပါးပြီး နူးညံ့နှစ်လိုဖွယ်၊ ပြီးတော့ သဘောကောင်းလှတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာပါပဲ။
ကျွန်မကို တွေ့တာနဲ့ “ဂျပန်က အခြေအနေကောင်းရဲ့လား၊ ဆူနာမီကော ဘယ်လိုနေသေးလဲ၊ တိုကျိုဘက်ကိုတော့ မလာဘူးမို့လား” လို့၊ လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း နှုတ်ဆက်လာပါတယ်။။။။။
“မင်း ဒီနေ့လာတာကောင်းတယ်။ ဒုက္ခတွေကြားကနေ ဒီအထိရောက်အောင်တောင်လာခဲ့တာပဲနော်” လို့ အပြုံးလေးနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။။။။။။
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု မိန့်ခွန်းတွေပြောတဲ့အချိန်မှာ တွေ့ရတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ရဲ့ မျက်နှာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ့်ကို မိခင်တစ်ယောက်လို…………နွေးထွေးလှတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်။ ဒါက သူမအတွက် ပထမဦးဆုံး ကျွန်မရဲ့ ခံစားတွေ့မြင်ရမှုပါ။
နောက်တော့ Lady ဟာ၊ ကျွန်မရဲ့ မေးခွန်းမှန်သမျှ ဘာတစ်ခုမှမချန်ဖြေကြားပေးတော့တာပါပဲ၊ မိသားစု အကြောင်း၊ သူမကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း၊ အဲ၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းကလည်း မပါလို့မဖြစ် ပါတာပေါ့ရှင်။
တခါတလေ ရီစရာလေးတွေကို ဟာသဥာဏ်အပြည့်နဲ့ ပြောသွားပါသေးတယ်။ သတိရတော့ ပြောနေတဲ့အကြောင်းကနေ တခြားအကြောင်းတွေဆီရောက်သွားလိုက်၊ ကျွန်မက သူမမေးတာကို ပြန်ဖြေနေရတာမျိုး ပြောင်းပြန်တွေတောင် ဖြစ်နေလိုက်သေးတယ်။ ပုံမှန် အင်တာဗျူးကို ၁၅မိနစ်ကို ၁နာရီအထိလက်ခံပေးထားတာတောင် စကားတွေက ပြောလို့မပြီးနိုင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ “ ကဲ၊ မရပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်” လို့ ပြောရင်းနဲ့ တောင် စကားကို ဆက်ဆက်ပြောနေမိခဲ့ကြပါတယ်။ သူမရဲ့သားတွေနဲ့ ကျွန်မက အသက်မတိမ်းမယိမ်းတွေလောက်ဆိုတော့ ၊ မိသားစု အကြောင်းတွေပြောပြတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ အမေတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေရတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ပြောရင် ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေ။ Lady ဟာ ကျွန်မရဲ့ အင်တာဗျူးကို သဘောကျပုံပဲ။ ၇နှစ်ခွဲလောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေခဲ့ရချိန်မှာ အိမ်အလုပ်တွေကူညီလုပ်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကလွဲပြီး စကားပြောဆိုခွင့် မရခဲ့ရှာပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ပြီးပြန်တော့လည်း တောက်လျှောက်ဆိုသလို ခက်ခဲတဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဂျာနယ်လစ်စ်တွေချည်းပဲဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ ၊ ကျွန်မနဲ့ အခုလို အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ မပြောခဲ့ရတာ အတော်ကြာခဲ့မှာပဲလို့ ….. တွေးမိပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းနဲ့ Lady ရဲ့ နေအိမ်တို့ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နေအိမ်ကတော့ သူမ ၇နှစ်ခွဲကြာအကျယ်ချုပ်ချခံခဲ့ရတဲ့ နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးအနေနဲ့ ကတော့ ဒီတစ်ကြိမ်က ပထမဦးဆုံးလက်ခံတွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူမရဲ့ အချစ်တော်ခွေးလေး “တိုင်းချစ်သူ” နဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအကြောင်းပြောတဲ့ အချိန်တိုင်း
Lady ရဲ့မျက်နှာဟာ တကယ့်ကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီး တည်ငြိမ်လှပါတယ်။ မြတ်နိုးစရာ မိသားစုတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ “မိခင်” တစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာ နဲ့ပါ။
ပြီးတော့ အခုလိုသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကျွန်မရဲ့ အင်တာဗျူးမတိုင်ခင် ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ များစွာသောဓါတ်ပုံများထဲမှာ မမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။
ဗီဇာရှိရင်ဗမာပြည်ကို ၀င်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် Lady နဲ့ တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးသွားသူတွေ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဝင်ခွင့် အရမ်းခက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်း ကိုသွားတဲ့အတွက်ဆိုပြီး ကျွန်မမျက်နှာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားပါတယ်။ ဒါဆို နောက်တစ်ခါ ဗီဇာရနိုင်မယ်တဲ့လား) ။ နောက်တစ်ခုက Lady လည်း၊ ဗမာပြည်က ထွက်လို့ကတော့ သူ့နိုင်ငံထဲသူ ပြန်ဝင်လို့မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးလေ။
ဒါကြောင့် အခုလိုကျွန်မကို ၀မ်းသာအဲလဲ လက်ခံပေးတာဟာ၊ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ပေပဲလားလို့ တွေးမိလိုက်တယ်။
ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာအရိပ်အကဲအားလုံးကို သိနေတဲ့ Lady ဟာ “ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ မင်း ကိုဘာမှ မှတ်မထားနိုင်ပါဘူး။ မင်းလိုပုံက ဂျာနယ်လစ်စ်မှ မဟုတ်တာ။ မင်း နောက်တစ်ခါဗမာပြည်ကို ပြန်ဝင်လာနိုင်ဦးမှာပါ” လို့ ဟာသလေးနဲ့ ကျွန်မရယ်လာအောင်ပြောပေးပါတယ်။ ပြောသေးတယ် “ဂျပန်နိုင်ငံ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခအကြပ်အတည်းတွေကိုလည်း ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေတယ်” စိတ်မာတဲ့ သူမက ပြန်တောင် အားပေးလိုက်သေးတယ်နော်။
အခက်အခက်မျိုးစုံကို ကျော်လွှားပြီး ၊ တိုက်ပွဲတွေကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတဲ့ သူမအတွက် ကျွန်မဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကနေသူမအကြောင်းတွေကို ပြည့်စုံအောင်မဖေါ်ပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူမနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာကို ကျွန်မတစ်သက်လုံး မေ့လို့မရနိုင်လောက်အောင် ထင်ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
စကားတွေအများကြီးပြောပြီးတဲ့ပြန်ခဲ့တဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာကျွန်မမြင်ရတဲ့ ဗမာနိုင်ငံဟာ ၊ အလာတုန်းကနဲ့တော့ လုံးဝမတူလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားခဲပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးဖြစ်မြောက်အောင် ကူညီခဲ့သူအားလုံးကို နှလုံးသားမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။
လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဖေးမကူညီမှု နဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်တာဗျူးကို ဆက်ဆက်ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
မူရင်း။ ။ http://blog.talk.vogue.co.jp/fashion/archives/3710951.html
စာကြွင်း ။ ။ “ခွေးလေးနံမည်ကို မြန်မာလိုရေးထားတာ မှားနေရင်ပြောခဲ့ပါနော်။”
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, May 19, 2011
နိုင်ငံတိုင်းက လူမျိုးတိုင်းက အသိအမှတ်ပြုပြီး လေးစားနေရာပေးခြင်း ခံရတဲ့ အန်တီစုပါဘဲ။
ယနေ့ခေတ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘယ်လိုလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကများ သူ့လို လေးစားခြင်း၊ နေရာပေးခြင်း၊ မြတ်နိုးအားထားခြင်း ခံရဖူးပါလိမ့်။
ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စကားပြော စာစုလေးပါပဲ မ,ကောင်းမွန်ဝင်းရေ...၊ ဘာသာပြန်သူက တော်လို့ပဲ ထင်ပါရဲ့.. စကားလုံး ရိုးရိုးလေးတွေနဲ့ ဘေးနားမှာ ထိုင်ပြောသွားသလိုပဲ၊ သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးကို အင်တာဗျူး လုပ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးလေးရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖမ်းလို့ရတယ်၊ အခုလို ဝေမျှတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
Thanksalot! Your translation isagreat job. We can know that about our mother.
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ တကယ်ပါ ။
ဘာသာပြန်ထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းမွန်ရေ... ဒီစာလေးဖတ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်